Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Yahya Haqqani
Yahya Haqqani xubin sare oo ka mid ah Shabakada Haqqani Network kaasoo kaalin wadajir ah ka qaatay militeriga kooxda, dhaqaale, iyo howlaha barabagaandada. Yahya wuxuu matalayay sida madaxa kooxda sharci gashan goorta hogaamiyeyaasha ugu sareeya Sirajuddin Haqqani (Yaxya Seedigiisa), Khalil Haqqani, iyo Badruddin Haqqani (geeriyoday) ay maqan yihiin. Sidoo kale Yaxya wuxuu la wareegay mas’uuliyaddihii sida habsocodka Shabakada Haqqani Network oo wuxuu fududeeyay maal-gelinta taliyihii Haqqani oo uu ku jiro kuwa hoos yimaada taliyihii Shabakada Haqqani Network oo hadda dhintay waa Sangin Zadran iyo hoggaamiyaha Shabakada Haqqani Network ee u qaabilsanaa howlaha isoo biimayska, Abdul Rauf Zakir. Sidoo kale Yaxya wuxuu matalayay sida tarjumaanka iyo fariinqaadaha afka Carabiga ee Sirajuddin Haqqani.
Yaxya wuxuu fuliyay oo uu sahliyay howlo xaddi badan ee taageerida weeraradii iyo howlihii kale ee Shabakada Haqqani Network. Horraantii sannadkii 2013, wuxuu maalgeliyay oo uu sahliyay dagaalyahannadii Shabakada Haqqani Network. Sidoo kale horraadkii 2013, Yaxya wuxuu isku dabariday wareejinta agabyada oo ka timaada United Arab Emirates oo ku socota Khalil Haqqani oo ah madaxa sare ee Shabakada Haqqani Network. Sannadkii 2012, Yaxya wuxuu iskudabariday qeybinta qalabyada qarxa ee la macbileeyay (IEDs) iyo qalabka isgaarsiinta, iyo sidoo kale wuxuu dib u eegay diyaargarowgii weerarkii ay Shabakada Haqqani Network qaaday 7 bisha Agoosto, 2013 ee ay ku qaday Saldhigga Howlaha ee Xoogga Isbahaysiga ee ku yaallay Gobolka Logar, Afghanistan, halkaasoo ay ku dhinteen seddex iyo toban qof, oo ay ku jiraan kow iyo toban shacab reer Afghan ah, ayaa lagu dhaawacay. Sannadkii 2011, Yaxya wuxuu taliyayaasha Shabakada Haqqani Network ee hoolfulinta u geeyay lacag ka timid Sirajuddin Haqqani.
Mar marka qaarkood Yaxya wuxuu ahaa isku-xiraha u dhaxeeya Shabakada Haqqani Network iyo al-Qaida oo wuxuu xiriir joogto ah ayuu la la’haa al-Qaida tan ilaa ugu yaraantii bartamihii sannadkii 2009. Doorkan markuu hayay, Yaxya wuxuu lacag u fidin jiray xubnaha al-Qaida ee gobolka si ay isaga bixiyaan qarash ahaan. Bartamihii sannadkii 2009, wuxuu matalayay sida isku-xiraha koowaad ee Shabakada Haqqani iyada oo ay weheliyaan dagaalyahaniintaa shisheeye, oo ay ku jiraan Carab, Uzbeks, iyo Chechens.
Yaxya sidoo kale wuxuu filiyay oo uu maareen jiray Shabakada Haqqani Network iyo warbaahinta Taliban iyo howlaha barabagaandada. Horraadkii sannadkii 2012, Yaxya inta badan wuxuu la kulm jiray Sirajuddin Haqqani si uu uga helo oggolaansha kama dambeyska ah ee fiidiyowgii barabagaandada Taliban ee uu Yaxya sameeyay. Yaxya wuxuu ka shaqeeyn jiray howlihii warbaahinta ee Shabakada Haqqani Network tan ilaa ugu yaraan 2009 markaasoo uu tafatiray fiidiyowyadii dagaalyahannadii Afghanistan isagoo howlahaasi ka fulin jiray dugsiyada Shabakada Haqqani Network dhexdeeda. Dhammaadkii 2011, Yaxya waxaa soo gaartay lacag lagu bixinayo qaraska warbaahinta ee Shabakada Haqqani Network oo ka timid Sirajuddin Haqqani ama kuwa Sirajuddin la shaqeeya.
Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka waxay Yaxya Haqqani ku magacowday inuu yahay Argaggixiso Gaar ah oo Caalami ah sida hoos timaada Amarka Go’aal meel-marinta ee 13224 ee soo baxay 5 bishii Febraayo, 2014.
Goobta Dhalashada: Miram Shah, Pakistan
Magacyada La Sheegto: Yaya Haqqani, Yahyah Haqqani, Haroon